Pele oo Tabar u waayay Shididda Shumicii Olombikada – Gool FM
Pele oo Tabar u waayay Shididda Shumicii Olombikada
(Rio de Janeiro) 06 Agoosto 2016 – Xidiggii hore ee Brazil Pele ayaa ka cudur daartay inuu ka qayb galo xafladdii furitaanka cayaaraha Olombikada 2016 ee shalay ka dhacday magaalada Rio de Janeiro.
Sababaha uu Pele uga baaqday inuu ka qayb galo xafladdaasi weyn isla markaana shido Shumicii Olombikada ayaa ah isagoo xanuunsan oo aan awood u haynin Toosh la cararka, sida lagu shaaciyay bayaan uu saxaafadda soo mariyay Pele.
“Saaxiibadayda qaaliga ah, waxaan ka cudur daaranayaa inaanan shucladda Olombikada qaadi karin, wax badan dartiin waxaa ii soo gaaray dhaawacyo fara badan, Isbitaalna muddooyin badan waan u jiifay, balse haatan ILAAHAY oo keliya ayaa ka weyn caafimaadkayga.” ayuu yiri Pele.
Pele ayaa qaatay talo ay siiyeen dhaqaatiirta oo ahayd inuusan awoodi karin inuu tooshka Olombikada shido oo uu la lugeeyo maadaama uu dareemayo xanuun dhinaca Murqaha ah isla markaana da’diisu sii caga cageyneyso 75 sanadood.
Waxaa intaa u dheer in Bishii December ee la soo dhaafay qalliin lagu sameeyay, waxaana Pele uu 77 gool u dhaliyay xulka Brazil 91′ kulan oo uu u ciyaaray intii u dhexeysay sanadihii 1957-71-kii, isagoo kula guuleystay Koobabkii Adduunka ee 1958, 1962 iyo 1970.
Daawo Sawirrada tababarkii ugu dambeeyey ee kooxda Man United ay isugu diyaarinayso Koobka Community Shield
KARTUUNKA MAANTA: Silvio Berlusconi oo aduun ka doortay Milan-tii weyneyd!